TweetTwo: Right Message, Right Now, Na Na Na | Martech Zone
TweetTwo: Right Message, Right Now, Right Ebe
Tuesday, August 30, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Were ya na ị bụ ụlọ ahịa na-alụ ọgụ ma ọ bụ ebe a na-ere nri kama n'okporo ụzọ ahụ, Starbucks na-ekwo ekwo. Kedụ ka ị ga - esi rute ndị ahụ na Starbucks? Tweet abụọ bụ ọrụ ọhụrụ nke na-enyocha nyocha nke ndị mmadụ na Twitter ma tinye Tweet ha ma ọ bụrụ na ha ruru ntọala gị. Nick carter, onye edemede blog nke Martech, mepụtara ọrụ dị omimi.
Nke a bụ nnukwu vidiyo na-akọwa ọrụ ahụ:
Nick mepụtara ọrụ ahụ iji chọpụta nke mbụ mgbe etinyere tweet na mpaghara dị nso na mgbakwunye na ntinye akụkụ anọ - nkwenye mara mma na onye ọrụ ahụ dị nso. Nke a bụ nnukwu echiche, n’enye ozi n’oge na ebe ọ dị mkpa. Enwere ọtụtụ ngwa dị iche iche maka nke a.
WordPress: Wụnye Jetpack ma Kwado Hovercards